China Net Uzimele, Heterosexual Structure Class ifektri abakhiqizi | Zhenyuan
Amayunithi ayisisekelo wohlaka lwegridi ayisigaxa esingunxantathu, umzimba ongunxantathu, i-cube, i-quadrangle enqunyiwe njalonjalo. Lezi zinto eziyisisekelo zingahlanganiswa zenziwe i-tripod, i-quadrilateral, i-hexagonal, isiyingi, noma olunye uhlobo lwesimo seplanethi. izinzuzo zesikhala samandla, isisindo esincane, ukuqina okukhulu, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, njll.Ingasetshenziswa njengophahla lwejimu, inkundla yemidlalo, ihholo lombukiso, ihholo lokulinda, inkundla yezitimela, indawo yokuma izindiza, isakhiwo sezinhlaka ezimbili zegridi yekholomu nendawo yokusebenzela kanye nezinye izakhiwo.
Isigaba sokuqala sakhiwe ngohlelo lwendiza, okubandakanya amafomu amane, okungukuthi, i-grid yokuqondisa i-orthogonally eqonde ngqo, i-grid-direction orthogonally ethambekele ekubekeni igridi, i-double-direction oblique ebeka igridi kanye ne-three-direction ethambekele ekubekeni igridi.
Uhlobo lwesibili lwakhiwe amayunithi ama-quadrilateral pyramidal. Kunezinhlobo ezinhlanu: igridi ye-quadrilateral evumayo, igridi ye-quadrilateral enhle, igridi ye-oblique quadrilateral, igridi ye-checkerboard quadrilateral ne-star quadrilateral grid.
Uhlobo lwesithathu lakhiwa amayunithi angunxantathu ama-pyramidal units. Kunezinhlobo ezintathu zama-pyramidal net angunxantathu, ama-tricone net kanye ne-honeycomb tricone nets.Ngokwendlela yesakhiwo segobolondo, ukwakheka kwegobolondo kungahlukaniswa kube igobolondo le-cylindrical, igobolondo eliyindilinga negobolondo le-hyperbolic parabolic. , kukhona igridi yensimbi, igridi yokhonkolo eqinisiwe nensimbi kanye negridi yokhonkolo ehlanganisiwe, lapho igridi yensimbi isetshenziswa khona ngaphezulu.
Ukuhlaziywa kwamandla wangaphakathi wegridi:
Isakhiwo segridi siyisistimu ephezulu yohlelo lwesakhiwo.Ukuhlaziywa kohlobo lweplate-type truss, ngokuvamile kucatshangwa ukuthi amalunga axhunyiwe, futhi umthwalo wangaphandle wenziwa emajoyini ngokuya ngomthetho ofanayo, ongaba kubalwa ngokwendlela yokuhambisa indawo yesikhala somkhumbi, okuyi-elementi yesici esilinganiselwe sohlelo lwenduku olunamahinji.Izindlela zokubala ezenziwe lula, ezinjengendlela yokuhlaziya uhlelo lokuphambana kohlelo kanye nendlela efana nepuleti, nayo ingasetshenziswa ukubala amandla angaphakathi nokufuduswa. we-single-layer shell truss ngokuvamile kucatshangwa ukuthi i-rigid-joint, okufanele ibalwe ngokuya ngenqubo ye-elementi ekhawulelwe yohlelo oluqinile oluhlangene.Igridi yegobolondo ephindwe kabili ingabalwa ngendlela yesici esilinganiselwe sohlelo lwenduku oluhlanganisiwe. -shell indlela nayo ingasetshenziselwa ukwenza lula ukubalwa kwezakhiwo zegridi yegobolondo engqimba elilodwa nongqimba oluphindwe kabili.
Design isakhiwo grid:
Ingxenye yesiphambano sesakhiwo se-truss kufanele sinqunywe ngokuya kokubalwa kwamandla nokuqina.Ukuze unciphise ubude obubaliwe bendawo yengcindezi futhi kukhulise ukuzinza kwayo, izinyathelo ezinjengokwengeza ibha yokuhlukanisa futhi ibha esekelayo zingamukelwa. kwegridi yohlobo lwepuleti kanye negridi yegobolondo ephindwe kabili eyenziwe ngensimbi ikakhulu ifaka amafomu amathathu: ukuhlangana kwepuleti elihlanganisiwe, ukuhlangana kwebhola okungenalutho okuhlanganisiwe kanye nokuhlangana kwebhola le-bolt. , futhi induku kanye nepuleti elihlangene lixhunywe nge-welding noma ama-bolts aphezulu. Amalunga webhola elingenalutho namalunga ebhola le-bolt afanelekile kwisakhiwo se-truss yensimbi yensimbi.Amalunga wohlaka olulodwa lwegobolondo lesakhiwo segridi kufanele akwazi ukumelana nokugoba amandla angaphakathi. Ngokuvamile, ukusetshenziswa kwensimbi kwamalunga kubanga cishe i-15 ~ 20% yensimbi esetshenziswe kuso sonke isakhiwo sesakhiwo segridi ....
Uhlelo lwaphansi lohlaka lwemeshi
Uhlelo lwaphansi lwegridi
Umdwebo wendlela yegridi
Uhlelo lwekhasi eliphansi lohlaka lwenetha
Umdwebo we-3D node design wegridi
Langaphambilini Ukwakha uhlelo lwamanzi nogesi
Olandelayo: Isigaba sokwakhiwa kolwelwesi
Umklamo wohlaka lwe-Portal
Umklamo wohlaka lwesikhala
Umklamo Wensimbi Wensimbi
I-Steel Frame House Design